कोरोनाविरुद्धको खोप कहिलेसम्म आउँछ नेपालमा? – Samabeshi Khabar
कोरोनाविरुद्धको खोप कहिलेसम्म आउँछ नेपालमा?
२६ पुष २०७७, आईतवार १२:४९ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, पुस २६ (ससं) । कोरोना भाइरस विरुद्धका अहिलेसम्म स्वीकृति भएका खोप दुई डोज दिनु पर्ने छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालले पनि पहिलो र दोस्रो गरि दुई डोज दिनु पर्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ।
खोप नेपालमा ल्याउनका लागि आफूहरु जतिसक्दो चाँडो हुने गरि तयारीमा जुटिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले बताएका छन्।
डा.अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि ल्याइने छ र त्यसपछि क्रमशः खोप ल्याइने छ।